Dhaqtar qolka umulinta lagu weeraray | Somaliska
Dhaqtar ayaa lagu weeraray qolka umulinta cusbitaalka Jaamacada Örebro bishaan bilowgeedii kaasoo isku dayayay in uu caawiyo haweenay waqtigaas umushay oo dhiig baxaysay. Kharaabada haweenayda qaasatan ninkeeda iyo dumaashigeed ayaa gacan ka hadal kula dhaqaaqay dhaqtar ayagoo diidanaa in uu nin u soo galo xaaskooda. Haweenayda ayaa xiligaas umushay oo dhiig baxaysay asagoo dhaqtarku isku dayaayay in uu caawiyo. Ninka haweenayda ayaa ku qayliyay dhaqtarku in uu ka baxo qolka balse dhaqtarka ayaa iska dhagatiray oo hawshiisa sii watay. Dhaqtarka ayay gacan u qaadeen ayadoo dumaashiga haweenayda uu dhaqtar gadaal ka haraatiyeeyay. Booliska ayaa loo wacay oo ragii meesha ka kaxaystay. Hosbitalka ayaa sheegay in ay cadeynayaan in aan dhaqaatiirta loo dooran karin rag iyo dumar nuuca ayay yihiin.
Dhaqtar qolka umulinta lagu weeraray
Dhaqtar ayaa lagu weeraray qolka umulinta cusbitaalka Jaamacada Örebro bishaan bilowgeedii kaasoo isku dayayay in uu caawiyo haweenay waqtigaas umushay oo dhiig baxaysay.
Kharaabada haweenayda qaasatan ninkeeda iyo dumaashigeed ayaa gacan ka hadal kula dhaqaaqay dhaqtar ayagoo diidanaa in uu nin u soo galo xaaskooda.
Haweenayda ayaa xiligaas umushay oo dhiig baxaysay asagoo dhaqtarku isku dayaayay in uu caawiyo. Ninka haweenayda ayaa ku qayliyay dhaqtarku in uu ka baxo qolka balse dhaqtarka ayaa iska dhagatiray oo hawshiisa sii watay.
Dhaqtarka ayay gacan u qaadeen ayadoo dumaashiga haweenayda uu dhaqtar gadaal ka haraatiyeeyay. Booliska ayaa loo wacay oo ragii meesha ka kaxaystay.
Hosbitalka ayaa sheegay in ay cadeynayaan in aan dhaqaatiirta loo dooran karin rag iyo dumar nuuca ayay yihiin.